Electronics Industry - Luoyang sandoka tungstène-molybdène Material Co., Ltd.
Tungstène sandoka molybdène
Molybdène VARAHINA firaka
Molybdène tevika MANDREL
HIGH hakitroky tungstène firaka
Tungstène CARBIDE firaka
Tungstène TIG ELECTRODE
Aviation Ary Fiarovana
Tungstène Heavy Alloys
Ny fomba fanaovana mafana
Power Distribution Ary Transmission
Conductivity mafana tsara, ny maso mafana coefficient ny fanitarana sy ny fahadiovana ara-nofo miavaka. Mazava tsara: ny vokatra ho an'ny indostria elektronika dia manana fananana ara-batana tena manokana. Nampiasaina toy ny tena ratsy spreaders takelaka sy ny hafanana, dia azo antoka fa azo itokisana ny herinaratra fitaovana.
Raha vao jerena, ny zava-misy fa elektrika singa tsy hiteraka hafanana toa manahy na inona na inona. Amin'izao fotoana izao, saika schoolchild misy afaka milaza aminao fa ampahany ny solosaina mahazo mafana raha ny mifamadika on. Raha mbola miasa ny fitaovana, ny ampahan'ny ao amin'ny Nanome angovo herinaratra dia very toy ny hafanana. Fa aoka isika handinika: Ny famindrana ny hafanana Azo naneho toy ny hafanana marary mitsika isan-tarika (ny) Velarana (hafanana marary mitsika hakitroky). Toy ny ohatra eo amin'ny sary ohatra, ny hafanana marary mitsika hakitroky maro elektronika singa mety ho tafahoatra. Araka ny avo tahaka ny any ny balafomanga nozzle tenda izay toy ny mari-pana ho avo 2 800 ° C mety hitranga.
Ny coefficient ny mafana fanitarana-dehibe iray hafa antony rehetra Semiconductors. Raha ny Semiconductor sy ny faladiany sy ny lovia fitaovana hanitarana fifanarahana amin'ny taha isan-karazany, rehefa tratran'ny hafanana fiovan'ny mekanika fihenjanana mipoitra avy eo. Mety hanimba ny Semiconductor na mahakasika ny fifandraisana misy eo amin'ny Chip sy ny hafanana spreader. Na izany aza, miaraka amin'ny fitaovana, fantatrao ianao ao azo antoka tanana. Ny fitaovana manana ny optimum mafana coefficient ny fanitarana ny fidirana Semiconductors sy ny seramika.
Rehefa tena ratsy Semiconductor takelaka, ohatra, ny fitaovana ampiasaina amin'ny rivotra turbines, lamasinina sy ny indostria fampiharana. Teo amin'ny fitondrana Semiconductor Modules ho an'ny inverters (thyristors) sy ny hery diodes, dia mitana anjara asa tsarotra. Nahoana? Noho ny optimum coefficient ny mafana fanitarana sy mafana tsara conductivity, Semiconductor base takelaka mandrafitra ny fototra mafy ho an'ny saro-pady Semiconductor silisiôma ary hiantohana ny fanompoana Module fiainana ny 30 taona mahery.
Hafanana spreaders sy tena ratsy takelaka vita amin'ny molybdène, tungstène, MoCu, WCu, Cu-MoCu sy Cu-MoCu-Cu laminates reliably nisinda ny hafanana amin'ny herinaratra niteraka singa. Izany na manakana ny overheating ny fitaovana elektrika sy mampitombo ny vokatra lifetimes. Ny hafanana spreaders manampy foana ny tontolo iainana mahafinaritra, ohatra, ao amin'ny IGBT Modules, RF fonosana na poti-LED. Efa lasa tena manokana ankapobeny MoCu fitaovana ho an'ny mitondra takelaka in LED poti. Izany dia manana coefficient ny fanitarana mafana toa an'i safira sy ny seramika.
Tsy manome ny vokatra ho an'ny orinasa ny elektronika isan-karazany miaraka amin'ny coatings. Izy ireo hiarovana ny fitaovana manohitra harafesiny sy hanatsara ny solder fifandraisana misy eo amin'ny Semiconductor sy ny ara-nofo.
© Copyright - 2010-2019: All Rights Reserved. Guide , Hot Products , Sitemap , DIEM Mobile
Tzm Plate, molybdène Plate, Tzm Sheet, molybdène Rod, molybdène, molybdène Sheet,